အနက်ရောင်သောကြာနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယူရို ၁ ယူနစ်အတွက်ယူပါ Androidsis
အနက်ရောင်သောကြာနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယူရို ၁ ယူနစ်အတွက်ယူပါ
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Bq, ပြိုင်ပွဲ
ငါတို့သိထားတဲ့အတိုင်း, အနက်ရောင်သောကြာနေ့သည်ထောင့်နားတွင်ရှိသည်။ များစွာသောလူများအတွက်ပြက္ခဒိန်တွင်ဖော်ပြထားသောဤနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သောအံ့ဖွယ်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုဟင်းချို၌ပင်ရက်သတ္တပတ်များစွာတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့ငါတို့ကိုမင်းကိုခေါ်လာတယ် သင်လွမ်းလို့မရတဲ့မြှင့်တင်ရေးတစ်ခု.
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြှင့်တင်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်တစ် ဦး တည်းသာယူရိုအဘို့အ BQ ရနိုင်သည်။ ဘယ်လိုလဲ? ကော်ဖီတစ်ခွက်ထက်နည်းသောစမတ်ဖုန်းကိုမည်သူမျှဝယ်ယူရန်စိတ်မဝင်စားပါသနည်း။ ဆက်ဖတ်ပြီးရင်မင်းဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာမင်းတို့ပြောပြမယ်။
1 အမြန်ဆုံးဖြစ်ခြင်းအတွက်အနက်ရောင်သောကြာနေ့ ၁ ယူရိုအတွက် BQ ဖြစ်သည်
2 ဤရွေ့ကားသင် 1 ယူရိုရနိုင် BQ devices များဖြစ်ကြသည်
2.1 တနင်္လာနေ့တွင် Aquaris X19 Pro 10 GB ၁၀ စီးယူနစ်။
2.2 အင်္ဂါနေ့ 20, Aquaris M10 10 ၏ 16 ယူနစ်။
2.3 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၂၁ တွင်၊ Cervantes ၏ ၁၀ ယူနစ်မှ ၄ ယူရို ၁ အထိရှိသည်။
2.4 ကြာသပတေးနေ့ (၂၂) ရက်တွင် Aquaris U Plus (22 GB) သည်ယူနစ် ၁၀ ခုရှိသည်။
3 ဤ BQ ထုတ်ကုန်များသည်လည်းအရောင်းမြှင့်တင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်
3.1 တနင်္လာနေ့မနက် ၁၀ နာရီမှ
3.2 မနက် ၁၀ နာရီမှအင်္ဂါနေ့ ၂၀
3.3 မနက် ၁၀ နာရီမှဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၂၁:
3.4 မနက် ၁၀ နာရီမှကြာသပတေးနေ့ ၂၂ ရက်
အမြန်ဆုံးဖြစ်ခြင်းအတွက်အနက်ရောင်သောကြာနေ့ ၁ ယူရိုအတွက် BQ ဖြစ်သည်
BQ ကုမ္ပဏီမှပေးသောအထူးအရောင်းမြှင့်တင်မှုမှာလှည့်ကွက်မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် သင်သည်အမြန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရလိမ့်မည် ကွန်ယက်၏။ ထို့အပြင်၊ သင်၌အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁ နှင့် ၂၂ ကာလအတွင်း BQ ကိရိယာများကိုယူရို ၁ ဒေါ်လာဖြင့်သာရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်ရမည့်အရာဖြစ်သည် BQ ၏« Black List »အတွက်စာရင်းသွင်းပါ။ မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့သင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ် နေ့တိုင်းစာတိုက်ပုံးကိုဂရုစိုက်ပါ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကနေ။ ၎င်းတွင်သင်သည်ယူရို ၁ ဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်သော link ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၁၀ ရက်မှ ၁၀ ရက်အလျင်အမြန်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာ Black List မှာစာရင်းသွင်းပြီး Black သောကြာနေ့မှာယူရို ၁ ဒေါ်လာနဲ့ BQ ကိုရယူလိုက်ပါ
ဤရွေ့ကားသင် 1 ယူရိုရနိုင် BQ devices များဖြစ်ကြသည်
တနင်္လာနေ့တွင် Aquaris X19 Pro 10 GB ၁၀ စီးယူနစ်။
အင်္ဂါနေ့ 20, Aquaris M10 10 ၏ 16 ယူနစ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၂၁ တွင်၊ Cervantes ၏ ၁၀ ယူနစ်မှ ၄ ယူရို ၁ အထိရှိသည်။
ကြာသပတေးနေ့ (၂၂) ရက်တွင် Aquaris U Plus (22 GB) သည်ယူနစ် ၁၀ ခုရှိသည်။
အားလုံး ၁ ယူရိုသာဖြစ်သည်။ အရာ၌ဤအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့မြှင့်တင်ရေးအပြင် သင်သည်သင်၏မြန်နှုန်းကိုပြသရပါလိမ့်မယ်, BQ သည်ဤအနက်ရောင်နေ့ရက်လေးရက်အတွင်းကောင်းမွန်သောအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည် နေ့တိုင်းနံနက် ၁၀ နာရီမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းများထက် BQ ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့နေ့တိုင်းရယူနိုင်ကြသည်။
ဤ BQ ထုတ်ကုန်များသည်လည်းအရောင်းမြှင့်တင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်
တနင်္လာနေ့မနက် ၁၀ နာရီမှ
မနက် ၁၀ နာရီမှအင်္ဂါနေ့ ၂၀
- ရွေးချယ်ထားသောပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်2× 1 ။
မနက် ၁၀ နာရီမှဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၂၁:
- ဆာဗန် 4
မနက် ၁၀ နာရီမှကြာသပတေးနေ့ ၂၂ ရက်
သောကြာနေ့က BQ တွင်သူတို့သည်အိမ်ကိုပြတင်းပေါက်မှလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ သင်သွားခွင့်ပြုမည်လား။ BQ အနက်ရောင်စာရင်းအတွက်စာရင်းသွင်းပါ အမြန်ဆုံးဘယ်သူလဲဆိုတာပြပါ။ အဆိုပါငွေပမာဏသည်ကျိုးနပ်သည်။ ၁ ယူရိုအတွက် BQ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ် e-reader ကိုရယူပါ နှင့်လာမယ့်က Black သောကြာနေ့၏အများဆုံးပါစေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Bq » အနက်ရောင်သောကြာနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယူရို ၁ ယူနစ်အတွက်ယူပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း
ARCore သည် OnePlus 6T, Xperia XZ3 နှင့် Honor 8X နှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်
TidyPanel နှင့်အတူစိတ်ပျက်စရာအကြောင်းကြားစာများကို status bar မှဝှက်ရန်